Nhanganyaya yaSuko Ptfe, Uhmwpe） Ram Tube Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE (polytetrafluoroethy) inowanzozivikanwa se PTFE, Teflon uye Plastic King. Iyo Teflon extruder muchina uyo unonyanya kugadzirisa extruding PTFE (UHMWPE) ptubeucts. Kuburikidza nhevedzano yezvakaitwa senge extrusion, kudziyisa, uye kutonhora, iyo pre-sintered PTFE poda mbishi zvigadzirwa zvinogadziriswa negondohwe chubhu extruder kune ptubeuce PTFE chubhu ptubeucts inosangana akasiyana maratidziro. Inokanganiswa nezvinhu zvinoenderana senge sekushandisa, kudomwa, zvigadzirwa, zvinoda mushandisi, nezvimwe, Suko anogona kugadzira uye ptubeuce PTFE chubhu michina ezvinyorwa zvakasiyana. Iyo polytetrafluoroethylene (Ultra yakakwira mamorekuru uremu polyethilini) ptubeucts ptubeuced negondobwe chubhu extruder anoshandiswa zvakanyanya mukemikari, zvekurapa, muchadenga, kugadzirwa kwemuchina, kupisa kupisa uye mimwe minda.
Suko ane makore mazhinji ekutsvagisa uye ruzivo rwekuvandudza mumunda wePTFE zvishandiso, inoshanda mukutsvagisa, kusimudzira, ptubeuction uye kutengesa kwePTFE zvishandiso. Midziyo yedu yakashanda nyika dzinosvika makumi mana nematunhu mumusika wepasi rose. Vatengi vedu vanobva kumaindasitiri ekurapa, eindasitiri yemuchadenga, maindasitiri emauto, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemotokari uye akasiyana maindasitiri epombi, uye Suko yave ichizivikanwa zvakanyanya neiyo yepasi rose fluoroplastic indasitiri.
Kambani tsika: Kugadzira, Tekinoroji, Kubudirira uye Kungwara.
Kambani basa: Kugadzira mhando yekutanga yePTFE zvishandiso. Suko akakodzera kuvimba newe.
1. MAITIRO PTFE, UHMWPE, RAM TUBE EXTRUDER
Dzakawedzeredzwa ptubeucts dzine hunyanzvi hwekuita maererano nehukuru uye kusimba kwesimba.
PTFE gondohwe chubhu extruder inogona kuenderera kusunda chubhu uye chubhu inogona kutemwa maererano nezvinodiwa.
Ipa yakakwana yeforoma system, iyo inosanganisira yakazara seti inoenderana nenhumbi, kupisa uye sintering system, kutonhora system, tembiricha controller, nezvimwe.
2. Midziyo KUSHANDA NZVIMBO DZINOKOSHA
Icho tembiricha yemukati yechirimwa inofanira kudzorwa isingasviki 28 ° C.
Iyo yakatwasuka extrusion michina inodhonza kubva kumusoro kusvika pasi. Iyo michina yakaiswa papuratifomu kana pasi ine nzvimbo yekukwirira ingangoita 2.8 metres. Iyo inoshanda daro munzira yehurefu hwechigadzirwa inoda kutariswa, uye hurefu hwakaringana hunofanirwa kuve hwakavimbiswa pasi peyakagadziriswa denderedzwa gomba remudziyo kuzadzisa zvinodiwa zvehurefu hweakadzingwa PTFE chubhu.
3. Midziyo PARAMETER
4. KUDZIDZISWA KWENZVIMBO UYE MOLD INSTALLATION DIAGRAM
Muchina Muenzaniso PFG150 PFG300 PFG500
Maitiro Vertical Ram Extruder M / c
Simba KW (Magetsi Magetsi) 15kw 22kw 72kw
Saizi Range OD 20-150mm 150-300mm 300-500mm
THK Kushivirira 0.1-0.2mm 0.1-0.2mm 0.1-0.2mm
OD Kushivirira 0.1-0.5mm 0.5-2mm 3mm
Yakawedzerwa Tube Kureba Enderera kuburitsa nehurefu husingagumi
Kubuda Kwega Kwega KG 8+ 10+ 13+
5. KUDZIDZISWA KWENZVIMBO UYE MOLD INSTALLATION DIAGRAM
6. ZVINOSHANDISWA ZVEKUSHANDISA
Tarisa kana iyo midziyo simba-pane voltage uye simba mutambo, uye mutsetse kubatanidza kunoenderana kune wiring dhayagiramu.
Tarisa nzvimbo yemafuta e hydraulic uye tarisa kana iyo hydraulic mitsara yakabatana mushe. Simbisa kutonhorera kwemvura kubatana uye kumanikidzwa mweya kubatana
Ongorora kana Foroma yakaiswa nemazvo. Mhanya uye debug pamurume kuti usimbise.
Batidza simba uye seta parameter senge kumanikidza, tembiricha yenzvimbo yega yega yekushisa, nguva yekubata, uye otomatiki kudyisa kumisikidza kuburikidza neiyo PLC system.
Wedzera iyo yakagadzirirwa pre-sintered powder kune iyo hopper kana dhiramu (manyore kana otomatiki).
Cheka iyo yakaburitswa PTFE chubhu kune inodiwa kureba.
Dzima muchina uye uchenese muforoma mushure mekushandisa.
7. Midziyo nekugadzira Mold
8. ZVINODZIDZISWA NEZVIMWE ZVINotsanangurwa
9. NZIRA DZINOTUNGAMIRIRA
10. PASHURE PEKUTengesa BASA
11. PTFE TUBE MUTSVENE ANOGONESESA KUDYA ZVINHU
Bvisa otomatiki kudyisa, kusanganisira yakamanikidzwa mweya inodzosera kufuridza system, tanga kudyisa sisitimu, geza hosipaipi, yekukweva pfuti, vharuvhu jenareta, pcb controller, nzira 30-300 kg / h, dhayamita 150mm uye kukwirira 600mm, seta otomatiki yekudyara nguva uye inoburitsa nguva, hupfu kuyerera kunodzora, ese esimbi simbi ptubeuction, akangwara kutonga.
Iyo yekuvhengana dhiramu iri 600mm dhayamita uye 700mm pakureba, ine 2.2kw yekudzikisa mota, inomhanyisa kumhanya kwe15-25 kutendeuka / min, 8-10mm gobvu repazasi ndiro, uye yekudyisa inokwana 75-90kg.
12. RELATED KUSARUDZA ZVINHU
Muchina Muenzaniso Kureba kwepasi pevhu Kureba kwemuchina Pamusoro peMuchina nzvimbo Hole Dhayamita
Zvekare zvinhu zvakapwanywa ptubeuction mutsara Dicer, muchina wekuwacha, crusher
Upfu chisanganiso / Powder & Anobatsira Muvhenganisi Kusanganisa hupfu nemafuta emvura
Hydraulic bar yekucheka muchina Cheka makuru saizi machubhu sezvaanodiwa